Nhau - Teyeleec Yekutanga Yegore Pikicha Vhidhiyo-inogadzira Campaign Detail Chiitiko Chekuita
Teyeleec Kutanga Chekutanga Photographic Vhidhiyo-inogadzira Campaign Detail Chiitiko Chekuita
Teyeleec Yekutanga Yegore Pikicha Vhidhiyo-inogadzira Campaign
Kunyangwe hazvo zita rekuti Teyeleec rakanyoreswa mu2015, chokwadi hatina kumbomhanyisa zita iri kare. Isu tese tinoziva kuomarara kwekugadzira zita rinozivikanwa. Kune mumwe anozivikanwa wechiChinese anoti anoenda "Vatatu vechigadziri akabatanidzwa anoita shasha pfungwa", zvinoitika kwatiri kuti isu tinofanira kusanganisa huchenjeri hwese pamwechete. Tinogona kukupa isu zvigadzirwa zvechigadzirwa, uye mushure mekunge uchizviedza, uye zvinoratidza hunhu hwakanaka, ipapo unogona kuita vhidhiyo yekuigovana neshamwari dzako uye nemhuri.
Pakupera kwegore ra2020, kuti tikanganwe kusurukirwa kwedu tese sevanhu, kukoshesa hupenyu hwatinahwo kunyangwe hwakakomba sei mamiriro azvino pasi rose, kukoshesa hushamwari hwatinahwo, kunyanya kukosha, kuwedzera Teyeleec's brand kuziva.
Shenzhen TEYELEEC TEYELEEC TECHNOLOGY CO., LTD, dhipatimendi rekushambadzira.
Kubva Zvita 1st 2020 kusvika Kukadzi 28th 2021.
Chiitiko Vatori vechikamu
Iko hakuna muganho, uyu mushando wepasirese-wepasi rose, munhu wese uye chero munhu anogona kuupinda. Asi sezvo iwe uchifanira kugadzira vhidhiyo, kana iwe uine yakawanda vhoriyamu yemagariro midhiya akadai Facebook, YouTube, twitter, isu tichafunga nezvayo sekutanga.
Kutanga, anotora chikamu anofanira kutitumira email (info@teyeleec.com), taura muchidimbu nezvake nehukama nenhepfenyuro dzazvino.
Chechipiri, anotora chikamu anofanirwa kutsanangura nekunyengetedza kuti sei tichifanira kutumira sampuli yemahara kwaari? Uye iwe urikuunza sei zita redu uye chinhu?
Chechitatu, anotora chikamu anofanirwa kutiudza kero yake yazvino yekutumira ine izere zita uye nhamba yefoni.
• Chechina, mushure mekufunga kuti mumiriri anokwanisa, tinotumira sampu yedu mukati memazuva matatu, mushure mekunge mumiriri atambira chinhu, anenge achitora chikamu anofanira kupedzisa kugadzira vhidhiyo mukati memazuva manomwe.
• Shanu, mushure mekunge tagamuchira vhidhiyo, kana isina kukodzera, anotora chikamu haakwanise kutumira painternet uye anofanira kuita vhidhiyo kasingaperi kusvikira yagamuchirwa naTeeleec. Iye anotora chikamu anogona kuita vhidhiyo pasi pemumwe mutauro kunze kwechiChinese.
Post nguva: Nov-18-2020	KUDZOKA